ड मा एक केटी के दिन?2वर्ष - बच्चालाई पहिले नै सक्रिय बाहिर संसार अन्वेषण गर्दा एक रोचक उमेर। एक उपहार को विकल्प संग एक पटक सबै वयस्क सामना जटिल छैन। म यो सानो राजकुमारी बीच उत्तेजना कारण छ कि यस्तो आश्चर्य गर्न चाहन्छन्। त्यसैले2वर्ष को केटी दिन र दिन के?
एक उपहार खरीद गर्दा उहाँले हुन अभिप्रेरित जो बच्चा, को सुविधाहरू टिप्पणीमा निश्चित गर्नुहोस्। केही मानिसहरू मोबाइल र सक्रिय खेल रुचि, र अन्य शान्त र शान्त प्रशिक्षण आकर्षित। तपाईं आफ्नो बच्चा वर्तमान साँच्चै मन दिन चाहनुहुन्छ भने, सबै विवरण मार्फत सोच्न निश्चित हुन।
सबै को पहिलो, तपाईं को लागि देख रहे कि सम्झना केटी को लागि एक उपहार। निस्सन्देह, त्यहाँ अवस्थामा जहाँ विभिन्न कार, ट्यांक, र अन्य जस्तै सानो princesses छन् केटाहरू लागि खेलौनाहरू, तर यो धेरै विरलै हुन्छ।2वर्ष को केटी दिन के सोचिरहेका, मनमा पनि राख्न सानो बालिका उज्ज्वल र सुन्दर प्याकेजिङ्ग प्रेम छ।
यी छोराछोरीको किताबहरू छन्। तिनीहरूले रंगीन छन्, त्यसैले सबै बच्चाहरु चित्रहरु हेर्न र आफ्नो छोटो कथाहरू सुन्न तयार हुन्छन्।
अवसर को नायक पक्कै विकासात्मक कार्टून को एक संग्रह कदर हुनेछ।
छोराछोरी शायद, एक ठाउँमा बस्न तिनीहरूले सक्रिय छन् र स्थिर गति छन्। तसर्थ, ठूलो उपहार एक स्कूटर वा साइकल हुनेछ। एक टोप, कुहिनो पैड र गोडा पैड किन्न: तर यो सुरक्षा को हेरचाह गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले चोट लागेको र abrasions देखि बच्चा रक्षा हुनेछ।
समावेश बस खेल आश्चर्य द्वारा डोरी, बल, डार्ट्स, Velcro वा पर्खाल बारहरू संग बलहरु।
सही विकल्प कसरी बनाउने?
केटी2वर्ष दिनको प्रश्न, कसरी एक उपहार, चयन गर्न सधैं सान्दर्भिक। अर्को, हामी यस विषयमा केही सल्लाह दिन, र तपाईं बताउन विचार गर्नुपर्ने के। सबै को पहिलो, तपाईंले एक जवान बच्चाको लागि वरदान खोजिरहेको छ कि सम्झना।
राम्रो गुणस्तर (वस्त्र र खिलौने जस्तै) र सिद्ध ब्रान्डहरु को कुराहरू चयन गर्नुहोस्।
वर्तमान मा धेरै सानो विवरण जोगिन। केटी कहिलेकाहीं वर्तमान र दुई वर्ष मा खेलौना भ्रममा गर्न सक्नुहुन्छ (उदाहरण को लागि, यो एउटा सानो खेलौना फल निल्छ गर्न सक्नुहुन्छ)।
तपाईं एक छुट्टी र बच्चा नातेदार गर्न निमन्त्रणा भने, यो आमाबाबुबाट उपहार को विकल्प छलफल गर्न राम्रो हुनेछ। तिनीहरूले पक्कै यो कुरा मा मदत गर्नेछ।
तपाईं विजय बाटो मा एक राम्रो उपहार पाउनुहुनेछ कि लाग्छ छैन। पहिल्यै खोजीमा संलग्न। केही पसलहरु भ्रमण तुलना गुणस्तर र मूल्य। त्यसपछि तपाईं क्रोधोन्मत्तता में पहिलो कि खरीद गर्न आउछ र आफ्नो बच्चाहरु सबैका लागि वर्तमान हुनेछ भन्ने विश्वास संग छुट्टी मा जाने।
2 वर्ष को केटी दिन के सोचिरहेका, सही कुरा बारे मा भूल छैन। बाल लागि टोपी, स्कार्फ, चड्डी, मोजा, बैग र बाल क्लिप र रबर बैंड: यस वर्गमा वस्त्र, जूता, र विभिन्न सामान समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया दुई वर्षमा बालिका यस्तो स्मारिका आनन्द छ। साथै, यसले आमाबाबु ठूलो मद्दत छ। यो धेरै महंगा छ - मलाई अलि जन्मदिन केटी जूता को एक नयाँ जोडी दिन भने, त्यसपछि बच्चा खुसी र अहिले आफ्नो बच्चाहरु पोशाक किनभने आमाबाबु खुसी हुनेछन् भन्ने विश्वास छ।
यस्तो उपहार खरीद गर्नु अघि, बच्चालाई छ, लुगा र जुत्ता को आकार पत्ता लगाउन निश्चित हुन। उदाहरणका लागि, खेलकुद सुट जूता वा: यो तथ्यलाई बारेमा आमाबाबुले संग परामर्श गर्न उपयुक्त यसलाई अब आवश्यक छ कि हुनेछ।
यी आफ्नो भविष्य सानो Mistress लाभ हुनेछ कि ती समावेश गर्नुहोस्। यो र शैक्षिक खेल, किताब, ब्लक, पहेली, डिजाइनर र धेरै अन्य विभिन्न। यस्तो आश्चर्य छनौट गर्दा, यो खातामा बच्चाको उमेर लिन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं2वर्ष को केटी गर्न दिन के थाहा छैन भने, उमेर मापदण्ड बारेमा विक्रेता सूचित। सायद उहाँले तपाईंलाई केही बहुमूल्य सल्लाह दिनेछु। त्यो राम्रो, भविष्यमा सजिला मा आउनेछ विचार संग एक उपहार किन्न छैन। उदाहरणका लागि, यो चार वर्ष एक बच्चाको लागि खेल विकास गर्न दुई वर्ष केटी दिन छैन आवश्यक छ। बच्चा जो अहिले फाइदा लिन सक्छ वर्तमान लागि प्रतीक्षामा छ।
धेरै रोचक उपहार विकल्प छोराछोरीको ई-पुस्तकहरू छन्। आफ्नो मद्दत संग, बच्चा, पढ्न गणना, नयाँ शब्द, गीत र ध्वनि सिक्न सिक्न हुनेछ। यी पुस्तकहरू तिनीहरूले प्राप्त ज्ञान परीक्षण गर्न कार्य समावेश रोचक छन्। दुई वर्ष मा, केटी नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छ, त्यसैले यो आश्चर्य सजिला मा आउनेछ।
त्यसैले तपाईं के रोज्नुहुन्छ?
2 वर्ष को केटी दिन के सोध्दा तुरुन्तै मनमा आउँछ: "खेलौना!" हाँ, यो एक जीत-जीत छ। तपाईं मात्र बच्चा ठ्याक्कै खेल रुचि जान्नु आवश्यक छ। आमाबाबुको सोध्न वा तपाईं अक्सर उहाँलाई भेट्न जाने भने आफैलाई हेर्नुहोस्। यहाँ बालिका दुई वर्ष को लागि सबै भन्दा राम्रो खिलौने को सूची छ:
गुडिया। यो उमेरमा बच्चालाई पहिले नै आफ्नो कार्यहरू सजग हुन थालेका छ। त्यो उनको आमा हेर्दै र उनको व्यवहार र बानी लिन खोज्छ थियो। यो उमेर मा, केटी रहन र धेरै वयस्क चाहन्छ। पुतली-छोरी उनको धेरै गर्न वर्तमान रूपमा, अब त्यो एक वास्तविक आमा जस्तै उनको पछि हेर्न सक्छन् किनभने।
नरम खेलौना। यो उपहार के केटी खुसी हुन हुनेछ? तिनीहरूले भरी पशु प्रस्तुत गर्दा पनि ठूलो बालिका खुसी छन्। मुख्य कुरा यस्तो वर्तमान, राम्रो र उज्ज्वल थियो त यो बिल्कुल जन्मदिन केटी जस्तै छ। अवसर को नायक के भन्दा मनपर्ने कार्टून सिक्न सक्छौं। तपाईं नरम खिलौने को रूप मा उनको यो प्रस्तुत भने, आनन्द छैन सीमा छ।
लुगा, strollers, cribs, गुडिया लागि सानो घर। पहिलो अनुच्छेद यो वाहेक। तपाईं पहिले नै जन्मदिन केटी "छोरी" छ भने, त्यसपछि यो उनको लागि विभिन्न लुगा मा धेरै उपयोगी छ। र गुडिया केटी लागि घुमक्कड र नांद देखि त्यो अब त्यो वास्तविक आमा गर्छ रूपमा, एक पैदल लागि उनको साथ जाने र सुत्न राख्न सकिन्छ, खुसी हुनेछन्।
खेलौना व्यञ्जन। धेरै वयस्क केटी दिन के सोचिरहेका छन्।2वर्ष - बच्चालाई खिलौने बीचमा मेरो आफ्नै सानो संसारमा सान्त्वना सिर्जना गर्न चाहँदा उमेर। चिया, सानो Mistress उनको मित्र निम्तो गर्ने आमा हेर्ने, पनि, यो के गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ। र यो आफ्नो व्यञ्जन छ भने, त्यसपछि यो चिया को प्रक्रिया एक वास्तविक खुशी मा परिवर्तन हुनेछ।
भूमिका निभाउनु। कसैले भर्खर दुई वर्ष मा एक बच्चा र एक कुक, शिक्षक र एक नर्तक हुन चाहनुहुन्छ छैन। भूमिका निभाउनु - यो दुई वर्ष र अझ यति बालिका लागि बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा उपयुक्त गतिविधिहरु छ। उदाहरणका लागि सानो केटी, डाक्टर को एक सेट दिनुहोस्। केटी बिल्कुल खुसी हुनेछन् र तुरुन्तै निरीक्षण र व्यवहार गर्न सबै सुरु हुन्छ।
रचनात्मकता लागि सबै। यो रंग, र मोडेलिंग माटो, crayons एक सेट र महसुस-टिप कलम र धेरै बढी हुन सक्छ। काम बाहेक, उहाँले सधैं नयाँ कुरा सिर्जना गर्न रुचि, राम्रो तरिकाले विकसित छ बच्चा।
हामी लेख2वर्ष को केटी दिन के को प्रश्न पढेपछि आतंक लागि कुनै कारण छ भन्ने आशा। यो कठिन भएको जन्मदिन केटी उपहार खुसी थियो बनाउनु हो। यसलाई राख्न एक सानो प्रयास र चकित र बच्चालाई खुसी तुल्याउने निष्कपट इच्छा छ पर्याप्त छ।
कृत्रिम, स्तन, र मिश्रित खानामा6महिनामा बच्चाको आहार
Nikolaya Reriha "इल्या Muromets" र अन्य masterpieces को तस्वीर
अभिनेता सर्गेई Stepanchenko: जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन
घर ravioli। तापवर्धक मूल्य
बालबालिका Oblomov: अनैतिक र अनावश्यक स्रोतहरु
गोर्की कामहरू: पूर्ण सूची। मैक्सिम गोर्की: प्रारम्भिक रोमान्टिक काम
कफी "स्यान्टोडोमिङ्गो": उत्पादन प्रदर्शन र ग्राहक राय
गुफा Tanechkina कहाँ छ। रोचक तथ्य को विवरण
खैरो रोटी कसरी Bake गर्न? सर्वश्रेष्ठ व्यञ्जनहरु